Mamela Ny Vondrom-piarahamonina Tompotany Kolombiana Handefa Antserasera Ny Fampianarana Ny Fiteniny Ny ‘En Mi Idioma’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Jolay 2017 4:39 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Français, русский, Italiano, Español, English, Português, Español, Català, polski, English
Nizara fahalalana momba ny fiteniny mba ahafan'ny taranaka fara aman-dimby mahafantatra momba ireo singa manan-danja avy amin'ny kolontsain'izy ireo ny vondrom-piarahamonina tompotany manerana an'i Kolombia . Mba hanamorana izany fampianarana manan-danja izany dia nandray anjara tamin'ny lesona mikasika ny fiteniny sy tamin'ny haino aman-jery ny vondrom-piarahamonina tompotany miisa enina, ary nijoro vavolombelona voalohany tao amin'ny sehatra antserasera antsoina hoe En Mi Idioma (Amin'ny Fiteniko).
Hetsika fiaraha-miasa teo amin'ny Minisiteran'ny Fampahalalam-baovao sy ny Teknolojian'ny Serasera (ICTs) ary ny fikambanana tsy miankina Kolombiana Colnodo ny tetikasa. Nomena fiofanana ireo vondrom-piarahamonina izay liana tamin'ny fandraisana anjara, ary afaka nisafidy ny vondrona tamin'ny fanaovana ny votoatiny ho an'ny mpikambana vondron-piarahamonina irery ihany izay nomena solonanarana sy tenimiafina manokana. Ny vondron-piarahamonina sasany, na izany aza, nisafidy ny hanao ny fitaovana rehetra ho maimaim-poana ho an'ny daholobe izay liana amin'ny fianarana bebe kokoa momba ny fiteny sy ny kolontsaina.
Namtrik, Nasa Yuwe, Emberá Chamí, Wayuunaiki, Barí, sy ny Kichwa no fitenindrazana hita ao amin'ny sehatra, ary ny fiteny Palenquero ihany koa , izay fiteny kreôla mifototra amin'ny teny Espaniola.
Ohatra, manazava ny tranonkalan'ny Embera Chamí ao amin'ny pejy fanolorana fa mandrisika ny fampandrosoana ny rafitra ara-tsoratra ihany koa ny fandraisana anjara ao amin'ny tranonkala: